यी हुन् बिहान सबेरै उठ्दा हुने फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्तो बानीले धेरैको दैनिकी अस्तव्यस्त बनाएको छ ।
कतिबेला सुत्ने र कतिबेला उठ्ने आफ्नो दैनिक तालिका कमैले मात्र बनाएका हुन्छन् । धेरैले यसरी समय निर्धारित गरेका हुँदैनन् ।
यस्तो अस्तव्यस्त दैनिकीले मानिसको दिनचर्या त खराब हुन्छ नै, साथै उनीहरु कैयौं खालका शारीरिक रोगहरुको चपेटामा पर्छन् ।
एक वैज्ञानिक अध्ययनको अनुसार जो मानिस बिहान छिट्टै उठ्छन् उनीहरुमा डिप्रेशनको सम्भावना पनि धेरै नै कम हुन्छ ।
शोधको नेतृत्वगरेका कोलोराडो बोल्डर युनिभर्सिटीका डाइरेक्टर सेलिन वेटरका अनुसार विहान छिटै उठ्नाले थुप्रै स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ । छिट्टै उठ्न थालेको केही दिनमै यसको असर देख्न सकिन्छ ।
अध्ययनबाट जो मानिस ढिलोसम्म सुत्छन् वा राती धेरै बेरसम्म सुत्दैनन् उनीहरुमा डिप्रेशनको समस्या दुईगुणा बढी हुने तथ्य पनि अगाडि आएको छ ।
राती अबेरसम्म नसुत्ने मानिसमा धुमपान गर्ने वा अनियमित निन्द्राको परम्परा विकसित हुन थाल्छ । निन्द्राको कमी, एक्सरसाइजको अभाव, सँधै घरभित्र रहने र धेरै समय अध्याँरोमा बिताउनाले डिपे्रशन सहित अन्य विभिन्न रोगहरुको जोखिम बढाउँछ ।
यो अध्ययनको प्रकाशन ‘साइकेट्रिक रिसर्च’ नामक पत्रिकामा गरिएको छ । यो शोधको लागि वेटरको टिमले ‘क्रोनोटाइप’ अर्थात रातमा जाग्नेहरुको डिपे्रशनको जोखिम बीच सम्बन्ध पत्ता लगाउन ३२ हजार महिला नर्सहरुको तथ्यांकको विश्लेषण गरेको थियो ।
यसमा २४ घन्टाको समयमा व्यक्तिको निन्द्राको प्रवृत्ति, सुत्ने जाग्ने रुची र मनोविकार समावेश छन् ।
वेटरले भनेका छन्, ‘हाम्रो परिणाम क्रोनोटाइप र डिपे्रशनको जोखिम बीच सामान्य सम्बन्ध देखाउँछ । यो क्रोनोटाइप र मनोदशासँग जोडिएको अनुवांशिक मार्गको ओभरल्यापसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ।’
ब्रह्म मुहुर्त अर्थात सुर्य उदाउन भन्दा पहिले उठ्नाको धेरै लाभ छन् । जसबाट ढिलो सम्म सुत्ने मानिस बञ्चित भइरहेका छन् ।
यदि तपाई विहान चाँडै नै उठ्नुहुन्छ र घरबाट निस्केर थोरै समय हिँडडुल गर्नुहुन्छ वा एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ भने यसबाट कैयौं लाभपाउन सक्नुहुन्छ ।
४. बिहान उठ्नु केवल स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन बरु यसले सामाजिक भावना पनि जोडिराख्छ । बिहानै उठेर हिँडडुल गर्नाले नयाँ नयाँ मानिसहरुसँग भेट हुन्छ र नयाँ विचारहरुको आदानप्रदान हुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार